Bokin'i Obadia - Howling Pixel
Fanoratana ny boky
Hosazina i Edoma (1.1 – 1.15)
Taorian’ny faharavan’i Jerosalema tamin’ny taona 587 tal. J.K., nandroba ilay fanjakana resy i Edoma. Lehibe dia lehibe ny alahelon’ny mpaminany Obadia tamin’izay. Hosazina i Edoma noho ny fitaka nataony tamin’ny Fanjakan’i Joda satria nandray anjara tamin’ny fandravana ny tanàna sy tamin’ny fisamborana ireo Israelita nila fialofana ny Edomita. Hampiharina amin’izy ireo, noho izany, ny maso solon’ny maso.
Ny andron'i Iahveh (1.16 – 1.21)
Ny bokin'ny mpaminany na bokim-paminaniana dia fitambarana boky ao amin'ny Testamenta Taloha ao amin'ny Baiboly izay inoan'ny Kristiana fa nosoratan'ny mpaminany nahazo tsindrimandry na fanilovana avy amin'Andriamanitra. Fanasokajiana ao amin'ny Baiboly kristiana io ka tsy tokony hafangaro amin'ny hoe Mpaminany (na Nevi'im) ao amin'ny Baiboly hebreo. Misy sokajy roa ny bokin'ny mpaminany, dia ny atao hoe "mpaminany lehibe" sy ny hoe "mpaminany madinika".
Ny fitsarana farany fitsarana hataon'Andriamanitra ny zavatra noforoniny, indridra ny olombelona, any amin'ny fiafaran'ity tontolo ity, ka hanomezana ny valin'ny nataon'ny tsirairay sy ho androm-pifaliana ho an'ny mpino mahatoky, araka ny fampianaran'nhy ankamaroan'ireo fivavahana abrahamika sy ny fivavahana hafa koa.
I Obadia na Abdiasa dia mpaminanin'i Israely voaresaka ao amin'ny Baiboly. Niaro ny ain'ireo mpaminany hafa miisa 100 izay nenjehin'ny mpanjakavavy Jezebela izy nary aminany ny handravana an'i Edoma. Tamin'ny andron-dry Jeremia angamba no fotoana nahavelomany ka mety nahita ny fandravana an'i Jerosalema sy ny Tempoly voalohany tamin'ny fanafihan'i Nebokadnetsara tokony ho tamin'ny taona 600 tal. J.K. Nanan-karena i Obadia nefa nozarainy tan'ireo mpaminany mahantra izany. Nindram-bola misy zanany tamin'i Jorama zanaky ny mpanjaka Ahaba izy hamelomany an'ireo mpaminany ireo. Lazain'ny Baiboly ho nihoatra ny an'i Abrahama ny fatahoran'i Ahaba an'Andriamanitra. Ny lovantsofina jiosy dia manao an'i Obadia ho nanoratra ny Bokin'i Obadia.